Testosterone undecanoate poda Vagadziri & Vanotengesa - Fakita
Raw Testosterone Undecanoate powder, inotengeswa pasi pemazita ezita Nebido, Aveed, uye Andriol pakati pevamwe, inonzi androgen uye anabolic steroid (AAS) mishonga iyo inoshandiswa kunyanya mukurapa maitiro epasi e testosterone mumarume. Inoshandiswawo mune hormone therapy for transgender men. Inotorwa nemuromo kanomwe katatu pazuva nechingwa kana kuti inopiwa nejisi mu musumbu kamwechete kwevhiki dze 12 kana zvakadaro.
Raw Testosterone Undecanoate powder (5949-44-0) Tsanangudzo
Raw Testosterone Undecanoate powder is the undecanoate ester form of androgen testosterone, ine gonadotropin-secretory inhibiting uye hormone replacement activity. Sezvo testosterone inhibisa kuchengetedzwa kwegonadotropin kubva pamucheka wepituitary, kutungamirirwa kwe testosterone kunoderedza kuvharwa kwemaroni (LH). Nokudzivisa kuchengetedzwa kweHH, kukura kwemasero eLeydig, anowanzosimudzirwa neHH kubudisa testosterone, inogona kubviswa. Mukuwedzera, mutengi uyu anokurudzira kugadziriswa kwehukama hwepabonde uye inogona kushandiswa kuti testosterone inotsiviwa mu hypogonadal varume.
Kemikari Name Raw Testosterone Undecanoate powder; 5949-44-0;
muchiso Name Androgen; Anabolic steroid; Androgen ester
Kirasi yeMishonga Hapana zuva rawanikwa
Kunyorera Point 64-64ºC
Water Solubility Inoputika
APane Raw Testosterone Undecanoate powder is the undecanoate ester form of the androgen testosterone
Chii chakakosha Testosterone Undecanoate powder (5949-44-0)?
Testosterone undecanoate powder ndiyo ester prodrug ye testosterone uye inenge ine midenguin fatty acid panzvimbo ye 17Beta. Inowanikwa sejena rejekiti uye sezwi remuromo, uye inoratidzwa kuti iwane kurapa kwe testosterone. Zvinofanira kuonekwa kuti testosterone undecanoate powder inongoratidzwa chete mukurapa kwehana ye hypogonadal nemarongerwo emaruva kana mazita ezvinyorwa uye haafaniri kushandiswa kugadzirisa "hypogonadism yakafanana nezera".
Iyo Yakakura sei Testosterone Undecanoate powder (5949-44-0) mabasa
Testosterone undecanoate powder ndeyekare yakaita shanduro yemunhu we testosterone, iyo yakasvibiswa nehutachiona hwepabonde. Testosterone inokonzera kukura kwakanaka nekuvandudzwa kwezvikamu zvepabonde zvevarume nezvimwe. Inosanganisira kukura uye kukurudzira nhengo dzevarume dzepenis, testicles, prostate, vhudzi remuviri, rwonzi rwedzi thickening, uye musimba uye mafuta ekugoverwa.
Vanhurume pamusoro pemakore gumi nemana ekuberekwa: Nhamba yakakurudzirwa ye testosterone undecanoate ndeye 18 mg (750 ml) intramuscularly; yakatevera na3 mg (750 ml) intramuscularly mushure memasvondo e3, uye 4 mg (750 ml) inopindira mavhiki e3 mushure mekunge.
Kusachengetedza uye kushandiswa kwetemporosterone undecanoate hakugadziriswi nevarume vari pasi peCNUMX yemakore.
Raw Testosterone Undecanoate powder (5949-44-0) Bhuku
Testosterone undecanoate powder inoshandiswa nevarume vasingaiti zvakakwana zvezvinhu zvakasikwa zvinonzi testosterone. Testosterone ndeyekirasi yemishonga inozivikanwa se androgens. Testosterone undecanoate powder inobatsira muviri kukura nekuchengetedza hukama hwepabonde hwevarume (masculinity), sezwi rakadzika uye bvudzi. Inobatsirawo kuchengetedza musuru uye kudzivirira kurasikirwa kwetema, uye zvinodikanwa pakugadzirisa zvepabonde zvepabonde / chido.
Testosterone undecanoate powder inogonawo kushandiswa mune vamwe vakomana vechidiki kuita kuti utange kune avo vane nguva yekupera.
Ichi chigadzirwa hachifaniri kushandiswa kuvakadzi.
Tenga Testosterone Undecanoate powder kubva kuBuasas.com